फेल हुनु भो ? बधाई छ | yugpath
फेल हुनु भो ? बधाई छ
by Neplee 1:34 AM0comments education exam fail great leaders inspiration pass
असफल नभई आविष्कार भएको कुनै एउटा वस्तुका बारेमा बताइदिनुस् अनि ह्यान्डराइटिङ नबिगारी सपार्ने एउटा मानिस अनि एकै पटकमा शब्द बोल्न जानेको बालक चिनाइदिनुस् । सबका सब असफल भएरै सफल भएका छन् ।
प्रिय विद्यार्थी साथीहरू,
एसएलसी नतिजाको सेरोफेरोमा तपाईहरूका लागि परीक्षा र नतिजासम्बन्धी केही कुराहरू लेख्न पाउँदा खुसी लागेको छ । अझ खुसी त यसकारण लागेको छ कि यो पढिदिने तपाई हुनुहुन्छ । नत्र, लेखाइको कुनै अर्थ हुन्थेन ।
म मेरो स्कुलमा मेरो समयको सबैभन्दा जान्ने विद्यार्थी थिएँ । कक्षा दुईदेखि कक्षा १० सम्म कक्षा प्रथम अनि अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अघि । त्यसैले मसँग मेरो विद्यालय, परिवार र साथीहरूले एसएलसीमा राम्रो नतिजाको आशा गरेका थिए, त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, जब नतिजा आयो, आशा निराशामा परिणत भयो । परीक्षाको नतिजामा मेरो सिम्बोल नम्बर निस्केन । मैले फेल लेखेको मार्कसिट पाएँ ।
फस्र्ट वा डिस्टिङसन ल्याउने भनेर सबैले आशा गरेको विद्यार्थी अप्रत्यासित रूपमा फेल हुँदा कस्तो भयो होला । सोच्नुहोला, लाइफ सकियो । तर, म त सुरुदेखि नै सबै नतिजा लाई स्वीकार गर्ने मानिस थिएँ । सोचेँ, ‘जाबो एउटा विषयमा त फेल भएँ, जिन्दगीको परीक्षामा चाहिँ पास भएरै छाड्छु ।’
मानिसले जीवनमा विभिन्न खाले परीक्षा दिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा दिने परीक्षालाई बिर्सेर एकपटक सोच्नुस् त तपाईले जीवनमा अनगिन्ती परीक्षाहरू दिनुपर्छ । एउटा असल छोराको रूपमा वा असल छोरीको रूपमा परीक्षा दिनुपर्छ । कहिले आदरणीय दाइ, दिदीको रूपमा त कहिले प्यारो भाइ, बहिनीको रूपमा । उमेरसँगै तपाईले दिने परीक्षाहरू पनि थपिँदै जान्छन् । कहिले प्रेमी–प्रेमिकाको रूपमा परीक्षा दिनुपर्छ त कहिले असल श्रीमान्–श्रीमतीको रूपमा । असल छिमेकी, राम्रो व्यक्ति, संस्थाको राम्रो सदस्यको रूपमा पनि परीक्षा दिनुपर्छ । जब तपाई रोजगार बन्नुहुन्छ, असल र सक्षम कर्मचारीको रूपमा, प्रेरणादायी हाकिमको रूपमा तपाईले परीक्षा दिनुपर्छ ।
यस्ता सयौं परीक्षा दिनुपर्छ, जुन कि तपाईको जिन्दगीका वास्तविक परीक्षाहरू हुन् र जिन्दगीको परीक्षा सामुन्ने शैक्षिक परीक्षा केही पनि होइन । ठूलो त जीवनको परीक्षा हो । जसमध्ये अधिकतरमा तपाई पास हुनैपर्छ । पास भएमा तपाई असल र सफल, फेल भएमा असफल र खराब ।
एउटा परीक्षामा फेल भइयो भने के पास हुने आशा नै त्यागिदिने ? नेभर । हामी जित्न जन्मेका हौं । हामीमा हार्ने आदत छैन, हुनु पनि हुँदैन । हामी सधै असल र राम्रो काम गर्छौं र त्यो काममा अघि बढेरै छाड्छौं । किनकी हार्न त हामीले जानेकै छैनौं । थोमस एल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक स्कुले जीवनमा पढाइमा एकदमै भुस्कुल थिए । जान्दै नजान्ने । शिक्षकले उनलाई साह्रै मूर्ख भन्थे । उनले १० हजार पटकको प्रयासपछि विद्युत्बाट बल्ने बल्व (चिम)को आविस्कार गरेका थिए । सोच्नुस् त, थोमसले एक पटक होइन, दश पटक होइन, सय पटक पनि होइन, हजार पटक पनि होइन । दश हजार पटकसम्म कोसिस गर्छन् र सफल हुन्छन् भने मैले किन एकै पटकमा हिम्मत हार्ने ? मैले अर्कोपटक परीक्षा दिएँ । अन्ततः फेल भएको विषयमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याएँ । थोमस एक–दुई पटकको असफलतासँगै अत्तालिएर चुपचाप बसिदिएका भए, सायद हामी बिजुलीको उज्यालोमुनि बस्न त्यति छिटै पाउदैनथ्यौं होला ।
सर आइज्याक न्युटनको जीवनी पढ्नुहोस्, कक्षामा सबैभन्दा नजान्ने विद्यार्थी थिए उनी । शिक्षक भन्थे, ‘तँ यो धर्तीको बोझ होस् ।’ शिक्षक र साथीहरूले हेप्ने र होच्याउने गरेपछि उनी विद्यालय कम मात्र जान्थे । भलै शिक्षामा पास नहुन्, तर उनी जीवनको वास्तविक परीक्षामा पास भए ।
गुरुत्वाकर्षणसम्बन्धी नियम पत्ता लगाएर विश्वविख्यात र दुनियाँका लागि प्रेरणास्रोत भए । न्युटनले स्कुले शिक्षामा भने कहिल्यै मन लगाएनन् तर आज संसारभरका स्कुलमा उनकै सिद्धान्त पढाइन्छ । यो पो हो त पास हुनु भनेको । परीक्षामा पास भएर जागिर खानु पनि कुनै उन्नति हो र ?
संसारका सबै सफल व्यक्तिको जीवनी पढ्नुहोस् । महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनदेखि संसारका धनी बिल गेट्ससम्म स्कुलमा धेरै जान्ने विद्यार्थी होइनन् । हामी सबैले चलाउने फेसबुक पनि सबैभन्दा धेरै जान्ने कम्प्युटर इन्जिनियरले बनाएका होइनन् ।
धेरै जान्ने विद्यार्थी त पास भएर उहिल्यै जागिर खान थाले होलान्, उनीहरू त्यत्तिकै सकिए । तर, फेल हुनेहरूले असफलता के हो भन्ने कुरा जाने । सफलता पाउनका लागि अघि बढे र जीवनको परीक्षामा पास भए । त्यसैले त आज उनीहरूको जीवनी हामी खोजी–खोजी पढ्छौं, उनीहरूका सिद्धान्त घोक्छौं । यसरी सिद्धान्त लेख्ने सिद्धान्तकार र वैज्ञानिकहरू धेरैजसो आफ्नो समयका स्कुल फस्र्ट थिएनन् । खोजे हुन्छ । त्यतिखेर म धेरै निरास बन्छु, जब म धेरै आशा गर्छु । मैले परीक्षामा राम्रो लेखेको छु भने राम्रो नतिजाको आशा गर्छु । परीक्षा राम्रो भएको छैन भने मैले राम्रो नतिजाको आशा गर्नु बेकार हो । त्यसैले आफूले गरेको कामभन्दा बढी आशा गर्नु हुँदैन । नत्र धेरै निरास होइन्छ । त्यसैले बरु आशा नै नगर्ने । पास भए हुँला, नभए अर्को पटक ट्राइ गरुँला । भन्दिनुस्, ‘फेल भए बाल मतलब, अर्को पटक जाँच दिएर पास हुने हो । फेरि फेल भए फेरि जाँच दिने ।’
जीवनको परीक्षामा सफल हुन असफलताले निकै सघाउँछ । तपाईले साइकल वा मोटरसाइकल चलाउन सिक्नुभएको छ ? त्यसरी सिक्दाका सुरुवाती दिन सम्झिनुस्, जवाफ ती दिनहरूले पनि दिनेछन् । नलडिकन हिँड्न जानेको कोही एउटा मानिस देखाइदिनुहोस् । असफल नभई आविष्कार भएको कुनै एउटा वस्तुका बारेमा बताइदिनुस् अनि ह्यान्डराइटिङ नबिगारी सपार्ने एउटा मानिस अनि एकै पटकमा शब्द बोल्न जानेको बालक चिनाइदिनुस् । सबका सब असफल भएरै सफल भएका छन् ।
असफलतालाई सफलताको सिँढी बनाएरै अघि बढेका छन् । त्यसैले मित्र, हार्नु हुन्न । फेल हुनु तपाईको अक्षमता हो । तर, फेल भएँ भन्दैमा हार्नु चाहिँ तपाईको गल्ती हो । अक्षम हुनु तपाईको दोष होइन, त्यसैले तपाई फेरि उठ्नुपर्छ, फेरि लड्नुपर्छ, फेरि उठ्नुपर्छ । परीक्षाहरू दिइरहनुपर्छ । किनकि परीक्षाले तपाईलाई खार्छ । सक्षम बनाउँछ । तपाईभन्दा शारीरिक, मानसिक रूपमा अक्षम मानिसहरू त बाँचिरहेका छन्, सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने तपाई एउटा जाबो परीक्षामा फेल हुँदैमा किन निरास हुने ?
तपाई महान र सफल बन्नका लागि पागल हुनुपर्छ । पागल नभई कसैले केही आविस्कार गरेन । आकासमा उड्न सकिन्छ भनेर राइट ब्रदर्सले भन्दा दुनियाँले उनलाई पागल भनेका थिए । एउटा यन्त्रको माध्यमबाट टाढा टाढा पनि कुरा गर्न सकिन्छ भनेर ग्राहम बेलले सोच्दा अरू मानिसले उनलाई मूर्ख भनेका थिए । पृथ्वी गोलो छ भनेर भन्दा कैयौं वैज्ञानिकहरूलाई देश निकाला गरियो । जसले अलि फरक काम गर्न खोज्यो, उसलाई दुनियाँले मूर्ख भन्यो । तर, अन्ततः उनीहरू नै सफल भए । सोझो काम गर्ने, रटेर पढ्ने, पास हुने, जागिर पाउने बुद्धिमानहरू इतिहासका केही पानामा सीमित भए । अब आफंै विचार गर्नुहोस्, तपाईको लागि शैक्षिक परीक्षा ठूलो कि जीवनको परीक्षा ।
मित्रहरू, असफलता तपाईको सत्रु होइनन् है । ती त महान गुरु हुन् । असफल हुनुभयो भने सोच्नुस्, ‘म सफलताको बाटोमा छु र मैले जीवनलाई नजिकबाट बुझिरहेको छु ।’
अरू सफल भएको हेरेर आफ्नो असफलताबाट निरास हुने होइन, त्यो मानिस सफल हुन कतिपटक असफल भयो, त्यो केलाउनुहोस् । सधैं सकारात्मक सोच राख्नुस् । आफूमा विश्वास राख्नुस् । तपाईको जस्तो क्षमता अरू कसैमा छैन । ग्यारेन्टी दिन्छु । तपाईले जसरी सोच्न सक्नुहुन्छ, जसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी अर्को मानिसले गर्नै सक्दैन । तपाई यो संसारको महत्वपूर्ण व्यक्ति हो । किनकि संसारका सात अर्ब मानिसमा तपाईको फिङ्गरप्रिन्ट कसैसँग मिल्दैन यो तपाईको मौलिकता र विशिष्टता हो ।
त्यसैले, आफ्ना साथीहरूलाई पास भएकोमा बधाइ दिनुहोस्, उनीहरूले भोलि तपाई सफल भएकोमा बधाइ दिनेछन् । शैक्षिक परीक्षा त केही होइन, तपाईले जीवनको परीक्षामा पास हुनुछ । त्यसैले उठ्नुस् । यौटै असफलताले गल्ने मानिस होइन तपाई । अघि बढ्नुस् ।
म फेरि पनि भन्छु, परीक्षामा पास हुनु मात्र सफलता होइन, जीवनमा पास हुनु वास्तविक सफलता हो । असफलतापछि सफलता हात पारेका केही विश्वविख्यात मानिसहरूको बारेमा जानिराख्नुस् :
फिल्ममा अवसर दिनुहोस् भन्दै जाँदा विख्यात हाँस्य अभिनेता चार्ली च्याप्लिनलाई धेरै निर्देशकहरूले अवसर दिएनन् । उनको अभिनय नबुझिने र अस्पष्ट छ भन्ने आरोप लगाइन्थ्यो, तर जब उनले पहिलो फिल्म खेले, तब सुपर–डुपर हिट भए । एक दर्जन फिल्म खेलिसक्दा त उनको तलब सय गुणाले बढिसकेको थियो ।
संसारकै प्रसिद्ध अभिनेत्री तथा नायिका मार्लिन मोनेरोले सम्झौता गरेको पहिलो फिल्म खेल्न पाइनन् । उनी नराम्री र ट्यालेन्ट नभएकी केटी भन्दै गरेको सम्झौता पनि तोडिएको थियो ।
विश्वप्रसिद्ध कार्टुन मिकी माउस बनाउने कलाकार वाल्ट डिज्नीलाई कुनै पनि खुबी नभएको मानिस भन्दै उनको समयमा आलोचना गरिन्थ्यो । उनी १६ वर्षको उमेरमा विद्यालय छाडेर आर्मीमा भर्ती हुन गए । उनी त्यसका लागि धेरै कम उमेरका भएकोले रेडक्रसमा सामेल भए । डिज्नीलाई अमेरिकाको शिकागोबाट फ्रान्स पठाइयो । त्यहाँ उनी त्यस्तो एम्बुलेन्स चलाउँथे, जसको सबैतिर फिल्मी पात्रको कार्टुन चित्रित थियो । त्यसैबाट प्रेरित भएर उनले वाल्ट डिज्नी कम्पनि खोले । उनको कलाकारीताले देश विदेशमा ख्याती कमायो । उनले ५८ वर्षको उमेरमा मानार्थ डिप्लोमा डिग्री प्राप्त गरे ।
फ्रेड एस्टायर नामक कलाकारले आफ्नो स्क्रिन टेस्ट दिँदा निर्णायकहरूले निर्णयमा यस्तो लेखेका थिए : अभिनय गर्न नजान्ने, गाउन नजान्ने, अलि–अलि नाच्न जान्ने । तर, उनैले संसारकै प्रसिद्ध डान्सर बनेर लाखौं युवतीहरूको मन जिते ।
भिसेन्ट भानगग नामक चित्रकारले जिन्दगीमा आफ्नो एउटा मात्र चित्र बेचे, त्यो पनि आफ्नो साथीलाई । तर, अहिले उनको चित्र अमूल्य सम्पत्तिमध्ये दरिन्छ ।
डाक्टर सेउस नामक लेखकको किताब छाप्न २७ भन्दा बढी प्रकाशकहरूले अस्वीकार गरिदिएका थिए । तर, पछि उनी सबैभन्दा प्रसिद्ध बाल पुस्तक लेखक बने ।
भ्याकुम क्लिनरका आविस्कारक सर जेम्स डाइसनले प्रोटोटाइप बनाउनको लागि पाँच एक सय २६ पटक कोसिस गरे । अन्ततः २७औं पटकमा प्रोटोटाइप बनाइ छाडे ।
ह्यारीपोर्टर नामक विश्वप्रख्यात उपन्यासको सातौं भागसम्म लेख्ने लेखिका जेके रोलिङ बेरोजगार र श्रीमान्सँग छुट्टिएकी थिइन् । पारिवारिक समस्याका अतिरिक्त उनी सफल लेखिका बनिन् ।
प्रसिद्ध लेखक स्टेफन किङले आफूले लेखेको उपन्यास चित्त नबुझेर त्यसलाई डस्टबिनमा फालिदिएका थिए । त्यो उपन्यासको पाण्डुलिपिलाई उनकी श्रीमतीले छाप्न दिइन्, जुन ३५ करोड प्रति छापियो ।
जोन ग्रिसम नामक अमेरिकी वकिलले तीन वर्ष लगाएर एउटा किताब लेखे, उक्त किताब छाप्नका लागि लाँदा प्रकाशकले २८ पटकसम्म अस्वीकार गरिदिए । तर, २९औं पटक बल्ल उनको किताब पाँच हजार प्रति छाप्नका लागि स्वीकृत भयो । तर प्रकासित भएपछि विभिन्न संस्करण गरेर २५ करोड प्रति छापियो र बिक्री भयो ।
माइकल जोर्डन नामक प्रसिद्ध बास्केटबल खेलाडीले भनेका छन्, ‘मैले मेरो खेल जीवनमा नौ हजारभन्दा बढी सट मिस गरेँ, मैले खेलेका तीन सय खेल हारेँ । २६ पटक जित्नै लागेको गेम पनि मेरै कारण हारें । मैले जीवनमा धेरै खेल हारें, त्यही नै मेरो सफलताको कारण बन्यो ।’
प्रख्यात होटल केएफसीका मालिक कोलोनल हारल्यान्डले ६५ वर्षको उमेरमा मात्रै केएफसीको सुरुवात गरेका थिए । व्यवसाय सुरु गर्दा उनीसँग मात्र एक सय पाँच डलर थियो । उनले एक हजार जनासँग आफ्नो भिन्न स्वादको परिकारको प्रस्ताव गरेका थिए, तर कसैले मानेनन् । आज उनको केएफसी ब्राण्डका होटलको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री विस्टर्न चर्चिल आफ्नो अध्ययनको छैठौं तहमा फेल भएका थिए । जसको कारण उनले सार्वजनिक सेवामा जागिर खान पाएनन् । तर, ६२ वर्षको उमेरमा उनी बेलायतका प्रधानमन्त्री बने ।
डेल कम्पनिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल डेलले १९ वर्षको उमेरमा कलेज छाडेका थिए । उनले आफ्नो कलेजको एउटा कक्षा कोठामा कम्प्युटर कम्पनि खोलेका थिए । पछि ऋण र नाफा मिलाएर कम्पनि विस्तार गरे । उनी अमेरिकाका अर्बपतिहरुको सुचीमा पर्छन् ।
आधुनिक सवारी साधनको व्यवशायीक उत्पादनका पहिलो व्यवशायी तथा आफ्नो जमानाको सबैभन्दा धनी हेनरी फोर्डले उच्च शिक्षा अध्ययन गरेनन् । फोर्डलाई उनका पिताले आफूजस्तै किसान बनाउन चाहन्थे । तर फोर्डलाई गाडी र इन्जिनमा रुची थियो । पितासँगको वादविवादपछि उनले घर छाडे ।
माइक्रोसफ्टका मालिक तथा संसारकै धनी बिल गेट्सले बिचैमा कलेज छाडेर साथी पाउल एलेनसँग मिलेर माइक्रोसफ्ट कम्पनि खोलेका थिए । आठ वर्षको उमेरमै कम्प्युटर प्रोग्राम बनाउन जान्ने भइसकेका उनले जम्मा ५५ हजार डलर लगानीमा माइक्रोसफ्टको सुरुवात गरेका थिए । यन्त्र उपकरण बनाउन रुची राख्ने उनले औपचारिक पढाइलाई प्राथमिकता दिएनन् । तर सन् २००७ मा उनलाई हावार्ड विश्वविद्यालयले मानार्थ डिग्री प्रदान ग¥यो ।
सबैभन्दा धनी युवाको रुपमा चिनीने फेसबुक संस्थापक मार्क जुकेरवर्गले पेपाल नामक कम्पनिका संस्थापक मध्येका एक पिटर थेलसँग पैसा सापटी लिएर फेसबुक बनाएका थिए । कलेजको गर्मी विदामा बनाएको फेसबुकले उनलाई नाम र दाम दुवै दियो ।
आमा शिक्षिका भएपनि बिरामीका कारण ढिलो मात्र अध्ययन सुरु गरेका महान वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसनले जीवनभर पढाइमा प्रगती गर्न सकेनन् । औपचारिक शिक्षा सुरु गरेको तीन महिनामै विद्यालय छाडेका उनलाई शिक्षकले मुर्ख भनेपछि उनीकी आमाले उनलाई विद्यालय छोडाएर घरमै पढाउन थालिन् । आमाको सिकाइ र आफ्नो मेहेनत र खोजका कारण सबैभन्दा बढी आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक बने । विद्युत् बल्व, चलचित्र, इलेक्ट्रिक जेनेरेटरलगायत उनको नाममा एक हजार आविष्कारको सुची छ ।
टाइम म्यागजिनले शताब्दीपुरुष घोषणा गरेका महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन स्कुले जीवनमा आइन्स्टाइन थिएनन् । उनी चार वर्षको उमेरसम्म बोल्न र सात वर्षको उमेरसम्म पढ्न सक्दैनथे । उनलाई उनका शिक्षकहरूले सुस्त र कामै नलाग्ने मूर्ख भन्थे । नोबेल पुरस्कार विजेता, अणुसुत्रका प्रत्युत्पादक आइन्स्टाइनले १५ वर्षको उमेरमा विद्यालय छाडेका थिए । उनी इतिहास, भुगोल र भाषामा धेरै कम अंक ल्याउँथे । उनले स्वीस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा भर्ना हुनको लागि प्रवेश परिक्षा दिएपनि फेल भएका थिए । त्यसपछि उनी पुनः क्याम्पसमा भर्ना भए, डिप्लोमा सके, अनि दोस्रो पटकको प्रयासमा मात्र विश्वविद्यालयको प्रवेश परिक्षामा पास गरे ।
प्रख्यात अंग्रेजी कथाकार चाल्र्स डिकेन्सका पिता खराब ऋणको कारण जेल गएपछि १२ वर्षका चाल्र्सले स्कुल छाडेर दिनको १० घण्टा काम गर्न थाले । उनले सुरुमा जुत्ता रंगाउने कम्पनिमा काम गरे, त्यसपछि कानुनी सहायकका रुपमा र अदालतमा बोलिएका कुरालाई छोट्याएर लेख्ने काम गर्न थाले । २२ वर्षको उमेरमा उनी अदालती समाचार लेख्ने पत्रकार भए ।
चाल्र्स डार्बिनको पढाइ विद्यालय तहमा एकदमै नराम्रो देखेर उनका वुवाले उनलाई विद्यालयबाट छुटाएर भने, ‘तँलाई कुकुर र मुसा समात्ने काम मात्र आउँछ, तलाई आफैमाथि लाज लाग्नेछ र तेरो परिवारलाई पनि ।’ डार्बिनलाई औषधी विज्ञान पढ्नको लागि पठाइयो । पछि प्रशासन पढ्न पठाइएका डार्बिन पढाइमा भन्दा खेलाडीहरुसँग धेरै समय बिताउँथे । तर त्यतीञ्जेलमा उनी वैज्ञानिक बनिसकेका थिए ।
प्रख्यात नेपाली हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्य पनि एसएलसीमा फेल भएको भनेर उनले आफ्नो आत्मवृतान्त ‘चिना हराएको मानिस’ मा उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो मेहेनत र कलाकारीताप्रतिको लगावको कारण आज नेपालकै महान कलाकारको रुपमा आफूलाई परिचित गराउन सफल बनेका छन् ।
यस्ता धेरै उदाहरणहरु हाम्रै वरीपरी छन् । त्यसैले परिक्षामा फेल हुनु असफल हुनु होइन । असफलता त त्यो हो, जब मानिसले परिक्षामा पास भएर पनि उन्नती गर्न सक्दैन ।
(इटहरीबाट प्रकाशित कलेज टाइम्स मासिक पत्रिकामा दुई वर्ष अघि प्रकाशित लेख ।)
TAGS : education | exam | fail | great leaders | inspiration | pass |